Ihe omume nke iri n'elu ihe iri maka ntanetị Web
Nchịkọta weebụ ma ọ bụ nchịkọta weebụ bụ usoro nke gụnyere ịnakọta ozi sitere na internet ma na-agbanwe ya dị iche iche formats. N'ikpeazụ, web scraping na-arụ ọrụ iji ụfọdụ mmemme na-ejikarị weebụ sọọfụfụ na-anakọta ozi kpọmkwem site na blọọgụ na weebụsaịtị. N'oge na-adịbeghị anya, e mepụtara ọtụtụ usoro dị elu iji mee ka ihe nchọgharị mmadụ na-eme mgbe anyị na-elele ibe weebụ na ịnakọta data achọrọ. Iji ha mee ihe, anyị nwere ike ịmepụta usoro data metụtara ọgụgụ isi, DOM na-eme ihe, mmekọrịta mmadụ na kọmputa, usoro asụsụ asụsụ na ọhụụ kọmputa.
Ngwaọrụ ihe ntanetị kacha mma ọ bụla:
Akụrụaka Anywhere bụ ụdị mpempe akwụkwọ arụmọrụ robotic (RPA). Ngwaọrụ a na-eji nnukwu ụlọ ọrụ eme ihe ma na-enyere ha aka wepụ data na ịntanetị n'enweghị nsogbu ọ bụla.
UlPath na-eme ka ọ dị mfe maka ndị mmepe weebụ na onye mmemme iji dọpụta data site na ebe nrụọrụ weebụ chọrọ. Nkà na ụzụ ya pụrụ iche na-enye ndị ọrụ ohere ịchekwa data na usoro nkọwa.
Usoro a na-enye nhọrọ ntinye data dị ukwuu ma na-enyere aka na nyocha ọrụ weebụ. Fọpụtara faịlụ ahụ na-abịa n'ụdị dịka CSV, Txt, XLS, na ndị ọzọ.
Ndị na-abụghị ndị mmemme na-eji Fminer eme ihe na-enyere ha aka wepu data sitere na weebụsaịtị na blọọgụ n'otu oge.
5..Ihe Nkiri Web View
Usoro nchịkọta weebụ a bara uru n'ihi na ọ na-ewepụta ọ bụghị naanị akụkụ Akwụkwọ Nsọ ma ihe osise na obere vidiyo.
Ọ na-ewepụ faịlụ ma dezie data n'ime edemede dịgasị iche iche. Ngwá ọrụ ndị a na-abịa na enweghị ọnụahịa ma nwee ike ịchekwa faịlụ gị na ụdị Txt na XLS.
Ọ dị mfe iji usoro maka nbudata data bụ isi njirimara nke dị na ngwa ngwa na nke ziri ezi.
8. Wepụ Web Wepụ
Ọ bụ otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kachasị mma na nke a na-emekarị ka ọ dịrị anyị mfe ijide ọdịnaya site na ọtụtụ saịtị. Ọ na-ahazi data anakọtara ma kewaa ya dị iche iche na-adabere na anyị chọrọ na atụmanya.
Ọ bụ Microsoft Corporation Import.io na-emepe ya ma malite. Import.io bụ otu n'ime ihe kachasị mma na ntanetị weebụ na-agụnye na ịntanetị. Ọ zuru oke maka ma ndị mmadụ ma ụlọ ọrụ ma na-ahapụ ndị ọrụ na-ewegharị ibe weebụ n'ime API na naanị clicks.
10. Web Extractor
Ọ bụ ngwá ọrụ SEO bara uru na n'efu nke ndị freelancers, ndị mmepe na SEO ụlọ ọrụ na-eme n'ụwa nile. Ọ na-enyere aka na ebe nrụọrụ weebụ na blọọgụ na-enweghị ihe ọ bụla, na njirimara ya bụ ndị na-ewe ihe nchịkọta engine, ndị na-ewepụta mkpụrụ okwu, ndị nchịkọta ihe nnọchiteanya, akwụkwọ akụkọ, na ndị na-enyocha ya Source .